Exim 4.95 Inosvika neStable Queue Processing, Kugadzirisa, uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura fiwe wakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeExpim 4.95, iyo inouya neakawanda akateedzana akagadziriswa uye matsva maficha akawedzerwa.
Kune avo vasingazive exempt, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo anotakura tsamba (Mutambi Wekutakura Mahosi, kazhinji MTA) yakagadzirirwa kushandiswa pane dzakawanda Unix masisitimu, kusanganisira GNU / Linux.
Este ine mukana mukuru wekuchinja panzira dzinogona kuteedzerwa nemeseji zvinoenderana nekwakabva uye por kuunza mashandiro e spam kudzora, DNS-yakavakirwa block zvinyorwa (DNSBL), mavairasi, kudzosera kudzora, vashandisi uye chaiwo maseru nevamwe, izvo zviri nyore kana zvishoma kugadziridzwa uye kuchengetedzwa.
Iyo purojekiti ine zvinyorwa zvakanaka, mienzaniso ye "maitiro ekuita" mamwe mabasa. Exim inogoverwa mahara pasina rezinesi pasi peGNU GPL rezinesi.
1 Main nyowani maficha eExpim 4.95
2 Dhawunirodha Exim 4.95
Main nyowani maficha eExpim 4.95
Mune iyi vhezheni itsva Tsigiro yemutsetse kugadzirisa modhi yekukurumidza ramp mameseji se yakazivisa kugadzikana, chii mhanyisa kutanga kwemeseji kutumira nemutsetse mukuru wekutumira uye kuvepo kwenhamba inoshamisa yemameseji anonyorerwa kune akajairwa mauto, semuenzaniso, kana uchitumira meseji nhamba hombe yeemaimeri makuru kune vanotumira tsamba kana kutumira kuburikidza neyepakati kutumira meseji mumiriri (smarthost).
Uyewo Tsigiro yeLMDB yakagadzikana compact inosangana yakakwira kuita iyo inochengeta data mune yakakosha fomati fomati. Kunotsvaga "kiyi-imwe chete" kutsvaga kwe-kunze-kwe-mubhokisi dhatabhesi kunotsigirwa (kunyora kubva kuExpim kuenda kuLMDB hakuitwe).
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti kumwe kumisikidza kuitiswa kweiyo SRS michina kwakadzikama (Sender Rewriting Scheme): "SRS_NATIVE", iyo isingade kutsamira kwekunze (iko kwekutanga kwekuyedza kuita kwaida kuti libsrs_alt raibhurari iiswe). SRS inobvumidza kero yemutumwa kuti inyorwidzwe pakuendesa mberi pasina kutyora SPF uye kuona kuti data yemutumiri inochengetwa kuseva kutumira mameseji muchiitiko chekutadza kwekutumira.
Uye zvakare, tinogona kuwana izvo akawedzera rutsigiro rwe "file = » mukutsvaga kwekutsvaga kuSQLite, zvichikubvumidza iwe kudoma dhatabhesi refaira kune rimwe basa pasina kudoma mutsara wekutanga pamwe neSQL yekuraira.
Mumibvunzo yekutsvaga kweLsearch, rutsigiro rwakawedzerwa sarudzo ye "ret = yakazara" kudzorera iro rese dhata rinoenderana nekiyi, kwete chete mutsara wekutanga.
Kugadzira kubatana kweTLS kunoitwa nekukurumidza kurodha pasi uye caching ruzivo (semuenzaniso, zvitupa) pane kurodha pasi usati wagadzirisa kubatana kwese.
Wakawedzera "message_linelength_limit" sarudzo yekumisikidza muganho pane huwandu hwevatambi mumutsara.
Iko kugona kwekupfuura cache paunenge uchitsvaga zvikumbiro kwakapihwa.
Zvekutakura zvekubatanidza, cheota cheki inoitwa kana uchigamuchira meseji (SMTP chikamu).
Wakawedzera "proxy_protocol_timeout" paramende yekumisikidza proxy protocol timeout.
Wakawedzera iyo "smtp_backlog_monitor" paramende yekugonesa kutemerwa kweruzivo nezve saizi yebacklog.
Iyo "makosi_require_helo" paramende yakawedzerwa kurambidza kufambiswa kwemirairo MAIL kana iwo HELO kana EHLO rairo risina kutumirwa kare.
Wakawedzera paramende "allow_insecure_tainted_data", kana zvataurwa zvisina kuchengeteka kupukunyuka kweakakosha mavara mu data kunoguma nekunyeverwa pane kukanganisa.
Yakamiswa macOS chikuva rutsigiro (gadzira mafaera akaiswazve patsva seasina kutsigirwa).
Yakagadzika iyo TLS_RESUME sarudzo, iyo inopa mukana wekutangazve yakambokanganiswa kubatana kweTLS.
Dhawunirodha Exim 4.95
Kuti uwane iyi nyowani vhezheni yeExpim 4.95 iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti mairi muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana zvinongedzo zvinoenderana neshanduro iyi nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Exim 4.95 inosvika neyakagadzikana mitsara kugadzirisa, kugadzirisa, uye zvimwe
Aya ndiwo marongedzero akamira kuve neinternet nekuda kweiyo Ngatinyorore chitupa